के तपाइँलाई योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ ? यसरी बच्न सकिन्छ
काठमाडौँ। के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक कहाँ उपचारका लागि जानु आवश्यक छ ।
मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाईराख्न सन्तुलित आहार, आठ घण्टाको निन्द्रा र दैनिक व्यायाम जस्ता बानीलाई आफ्नो जीवनशैलीमा अपनाउने गर्दछन् । तर वेलायतका एक व्यक्तिले भने आफ्नो स्वस्थ जीवनशैलीलाई कायम राख्न
काठमाडौँ। के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक
के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले ? लिफ्टभित्रै पिसाब गर्दा फसे यी युवा
एसिया । चीनमा एक जना युवाले लिफ्टभित्र पिसाब फेरेपछि त्यहीँ थुनिनुपरेको छ । लिफ्ट चढ्ने क्रममा पिसाब फेरेपछि युवा त्यहीँ फसेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनको हर्कतले तहल्का पिटिरहेको छ ।